I-Logitech K600, sihlaziya ikhibhodi ehamba phambili kakhulu ye-Smart TV | Izindaba zamagajethi
I-Logitech K600, sihlaziya ikhibhodi ehamba phambili kakhulu ye-Smart TV
Ama-Smart TV afike "ngokuzumayo" emakhaya ethu, ayingxenye ebaluleke kakhulu yawo futhi manje ahlanganisa ne-IOT ngokujwayelekile ngenxa ukuhambisana ne-Alexa, i-Google Home kanye ne-Apple HomeKit. Kungakho sidinga izindlela zokufaka eziyinkimbinkimbi, ngokunembile manje izinto eziningi zingenziwa.
Uma abakhiqizi bethelevishini behlulekile ukuthuthuka kakhulu eminyakeni edlule, bekuyizilawuli nezinhlelo zokufaka ngqo. Siphethe i ILogitech K600, ikhibhodi yemisebenzi eminingi enamagundane nokhiye abazinikele be-Smart TV yethu, thola zonke izici zayo.
Lekhibhodi ingaphezulu kokungeziwe okulula, okuhlukile kunakho konke okubonile ezinyangeni ezedlule ngezinye izinkampani, icwecwe, yinhle futhi ngaphezu kwakho konke inakho konke ongakudinga kuthelevishini yakho, ngoba yize ihambisana namadivayisi amaningi , isizathu sabo esiyinhloko sokuba khona ukuhlanganyela nathi ngezikhathi zethu zokuzijabulisa ezinde ekhaya. Manje sizohlaziya isici ngasinye esinquma kunazo zonke seLogitech K600 ukwazi ukukusiza lapho ukhetha ukuthenga kwakho, kepha uma ufuna ukukuthenga manje,ungayithola kulesi sixhumanisi se-Amazon.
1 Yakha futhi wakhe ekuphakameni kweLogitech
2 Ukuxhumana ne-hardware, izinhloso eziningi
3 Ukucushwa nesipiliyoni somsebenzisi
4.3 Okuhle kakhulu
Yakha futhi wakhe ekuphakameni kweLogitech
Asinakungabaza ukuthi njengayo yonke imikhiqizo, iLogitech ingagxekwa ngezinto eziningi, kodwa-ke, kuyacaca ukuthi ayinakubangelwa yikhwalithi yezinto ezisetshenziswa ngamadivayisi wazo, kanye nakwidizayini. Bazi kahle ukuthi bangayifunda kanjani induduzo ngokweqile futhi kwenzeke futhi ngaleli khibhodi ye-K600. Inosayizi ohlangene kahle kanye nokuhlelwa kukanxande, ukugoba okuncane okwenza kube ntofontofo esandleni nemilenze lapho uyisebenzisa kusofa, kanye nokuhlelwa ohlangothini lwesobunxele lwezikhiye zokufinyelela eziqondile zama-TV we-smart, ngenkathi ngakwesokunxele sishiya igundane lokuthinta eliyindilinga ngokuphelele nephedi ukuze uzulazule kusuka ngokunembile, konke okumhlophe kuqhathaniswa nezinye izinkinobho ezimnyama.
Usayizi: 20mm x 367mm x 117mm
Isisindo: I-500 amagremu
Izinkinobho azizinkulu ngokweqile, iningi linosayizi ofanayo emibuthanweni, ngenkathi ine-curvature encane ukuze ikwazi ukunethezeka eminwe futhi akukho ukungabaza lapho ucindezela ukhiye, into ejwayelekile kumakhibhodi ale nkampani. Ukwakhiwa kuqinile kupulasitiki omnyama, okhiye banokuhamba okufishane kepha okunembileNgasikhathi sinye ukuthi engxenyeni engemuva sinama-rubbers ama-anti-slip kuphela kanye nekhefu lamabhethri nesamukeli.
Ukuxhumana ne-hardware, izinhloso eziningi
Kumele kuqashelwe kwasekuqaleni ukuthi sibhekene nekhibhodi ezoba khona ehambisanayo ngamadivayisi angenamkhawulo, asevele esebenzisa umamukeli, njengokuxhumeka okuHlanganisa, okungukuthi, sizokwazi ukukujabulela ku I-Windows, i-MacOS, i-WebOS (i-LG television), iTizen (ithelevishini ye-Samsung), i-Android TV, i-Android kanye ne-iOS (Kokubili i-iPhone ne-iPad). Vele, ingaguqulwa ngokhiye owodwa nje, ngenxa yohlelo Lokuhlanganisa, lube ikhibhodi yethelevishini yethu noma ikhibhodi ye-iPad yethu ngokuya ngezidingo zethu, futhi lokho kuyenza ibe yindawo enhle kakhulu yezimo cishe zonke izimo. Le ndlela isetshenziswe yiLogitech isikhathi eside kumadivayisi wayo futhi izibonakalise njengenye indlela ekahle.
Ngokwengxenye yayo, kubalwa njengoba sishilo I-Bluetooth 4.2 enikeza uhla lwamamitha ayi-15 ezimweni ezinhle, ngoba lokhu kunesibani se-LED esihlanganiswe kukhiye ekhoneni eliphezulu elingakwesobunxele esizosazisa ngesimo sokuxhumeka, empeleni singakwazi ukugcina amadivayisi amathathu ahlukene kuso. Futhi, njengoba sishilo ngenhla, kuyasebenza ngamabhethri amabili e-AAA azohlala cishe izinyanga eziyishumi nambili, okuthile esingakwazanga ukukuqhathanisa ngezizathu ezisobala, kepha lokho kunikezwe ukusetshenziswa kwamanye amadivayisi afanayo esingacishe siqinisekise. Lawa mabhethri abuye afakwe kuqala, okungukuthi, afakwe ngqo kwikhibhodi, futhi lokho kuyinto okufanele yaziswe futhi esiyigcinayo.
Ukucushwa nesipiliyoni somsebenzisi
Uma uyihlela kunoma iyiphi i-iOS, i-MacOS noma i-Windows device ngokujwayelekile uhlelo luba lula, simane sisebenzise indlela ye-Bluetooth ukuyixhuma ngokushesha futhi uma isinikezwe ukhiye othile wenombolo ye-Unifying ekulungele ukuyisebenzisa, cishe yi-plug & Play. Izinto ziba nzima uma uzilungiselela i-Smart TV, lapho-ke kuzofanele sihlukanise phakathi kokuthi sine-Bluetooth noma cha. Endabeni yokungabi nayo i-Bluetooth, simane sixhume isamukeli bese sivula iwebhusayithi "www.k600setup.logi.com" futhi izosinika iziyalezo ezilula ezizoyenza isebenze ngokuzenzekelayo.
Uma yonke into isilungisiwe sekuyisikhathi sokuyisebenzisa. Njengokuhlangenwe nakho, engikwazile ukukugqamisa kakhulu yikhwalithi nokuhamba kokhiyeKodwa-ke, kwi-smart TV ngeke sibhale kakhulu ngokunembile futhi lokho kubonwe abafana baseLogitech. Kungakho sithola okhiye abazinikele ngakwesobunxele bezinqamuleli ezivame kakhulu zezinhlelo ezifana neTizen of Samsung televisions, Futhi ukuthi iphuzu lokwehlukanisa kakhulu nelinquma kunawo wonke lale khibhodi ukuthi kulwazi lwami likubeka ngaphambi komncintiswano. Elinye iphuzu eliphawuleka kakhulu ukusebenza okuqondile nokunembile kwephedi yokuthinta elinayo ohlangothini lwesokunene futhi okusivumela ukuthi sisingathe igundane eliboniswa ngokwesibonelo kusiphequluli samathelevishini e-Samsung, lisebenza ngaphandle kwanoma yiluphi uhlobo kusuka i-lag yokufaka futhi kahle, le thinta yokuthinta inenzwa yengcindezi ukuze sikwazi ukukhetha okuqukethwe, futhi lokho kuhle impela, azikho izinhlelo zokuthinta ezingacacile.
Isebenzisa amabhethri we-AAA
Akuyona i-Plug & Play ku-Smart TV
Hhayi enye indlela eshibhile
Ngaphandle kokungabaza, yonke into inamaphuzu amabi, futhi okokuqala ngithola ikhibhodi ye-K600 I-mania yeLogitech yokuqhubeka ngaphandle kokubheja kumabhethri alolu hlobo lwekhibhodi. Kuyacaca ukuthi amabhethri angandisa impilo ephezulu yehadiwe, kepha entweni edla okuncane kakhulu, ibhethri elishajekayo lingakuhle ukukhohlwa ngokuphelele ngamabhethri (izikhathi ezimbalwa esizodinga ukuwashintsha). Ukuvumelanisa ne-Smart TV akubonakalanga kulula ngokweqile kimi., okungenani kulokho iLogitech esiyisebenzisile.
Ukuhambisana okuphezulu okuhlanganisa
Engikuthandile kakhulu ngekhibhodi kwakuyizinto zokwakha kwasekuqaleni, kepha lokhu bekuyinto ebingalindelekile kuleli zinga lentengo, ngakho-ke esikhundleni salokho sazethula ukuze sigqamise ngaphezu kwephedi yokuthinta eqondile, ephelezelwa yiphedi ekhombayo ukuze ukwazi ukuzulazula kusixhumi esibonakalayo somsebenzisi, ngaphandle kokukhohlwa okhiye abazinikezele bezinqamuleli ze-Smart TV. Ngaphandle kokungabaza, yakhelwe ama-TV ahlakaniphile futhi ayenze kahle impela.
Impela iLogitech K600 ibhalwe njengeyona ndlela engcono kakhulu kulolu hlobo lomkhiqizo, kepha-ke, akuyona ikhibhodi ejwayelekile yendawo yonke esiyithola cishe ama-euro angama-20, sibhekene nesiphetho esiphezulu salolu hlobo lomkhiqizo, futhi yize kubiza cishe ama-79 kuwebhusayithi ye-Amazon, Singayithola kusuka kuma-euro angu-59,90 ngqo ku-Amazon.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Izibuyekezo » I-Logitech K600, sihlaziya ikhibhodi ehamba phambili kakhulu ye-Smart TV